JUNE&MAY: Two by One
Posted by JuneOne at 9:00 AM
Hi Ma, I am also going back to yangon for giving birth to my first child. My sister has bookedaroom for me at Sakura too. Could u pls share me your experiences and how much it cost ?
ဟေး..ပြန်လာပြီ။ သမီးလေးကလည်း ချစ်စရာလေးပဲ။ သားကြီးနဲ့တူတယ်။
Hi Glad to read ur post. She is so cute. Yes I understand how u tired. Pls write more post to yr lovely one.
Rita August 30, 2010 at 10:13 AM
မီးမီးလေးက မွေးကတည်းက အချောလေး။ မျက်လုံးလှလှလေးနဲ့။
edwin လေးလည်း သနားပါတယ်။ သူ့ကို နားလည်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အဲလို ဖြစ်ဖူးလို့။
ပုံရိပ် August 30, 2010 at 10:47 AM
ပြန်လာပြီလား။ သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက် အတော်ပဲပေါ့။ သမီးလေးက ချစ်စရာ။
:P August 30, 2010 at 10:54 AM
Cute me mee lay
sis, pls share ur experience more!
The Queen August 30, 2010 at 12:25 PM
She is as cute as her brother.
မျက်နှာ အစာပလာ အတော်ကြီးတာပဲ.။
၂ယောက်တွဲ တွန်းလှည်း ဘယ်လိုမှ တွန်းမကောင်း။
Myo Mon Yee Oo August 30, 2010 at 4:18 PM
Myo Mon Yee Oo August 30, 2010 at 4:20 PM
သား ၁ယောက်၊ သမီး ၁ယောက်။ ကံထူးသူပဲ။ အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်း တောင့်တကြတဲ့ ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
ZT August 30, 2010 at 8:25 PM
ဒီလိုပါပဲ။ နောက်တော့ အဆင်ပြေ သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့် အကိုလည်း သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် တစ်နှစ်ပဲ ကွာတယ်။ အစပိုင်းတော့ သူတို့ အမေ အတော် ပင်ပန်းတယ်။ အခု ကလေးတွေ ကြီးလာတော့ ၂ ယောက်စလုံး ပြိုင်တူ လက်လွှတ်လို့ ရပြီ။
သက်တန့် August 30, 2010 at 9:35 PM
ဟုတ်တယ်။ အခုပင်ပန်းပေမဲ့ ကြီးလာတဲ့အခါ သူတို့အချင်းချင်းလည်း အဖော်ရတာပေါ့။ အသက်အရမ်းကွာတဲ့အခါ ပိုပြီး Jealous ဖြစ်တဲ့အပြင် အမေက အငယ်ကိုပဲ ဂရုစိုက်မိနေရင် အဲဒီဒဏ်ရာက ဘယ်တော့မှ မပျောက်တော့ဘူး။ အခုအရွယ်က သိပ်မမှတ်မိတော့ အတော်ပါပဲ...
လွတ်ငြိမ်းလေပြေ (breeze) August 30, 2010 at 9:52 PM
Baby girl looks like you, sis :)
very busy and tired?
take care of your health , too
nu-san August 30, 2010 at 11:40 PM
ပြန်လာပြီလား ညီမ.. သမီးလေးက ချစ်စရာလေးပဲ.. အခုတစ်ယောက်က သမီးလေးဆိုတော့ ကျော့ဆန္ဒတွေပြည့်သွားပြီနော်.. ကောင်းလိုက်တာ.. ခဏတော့ ကသီမှာပဲ.. သားလေးကိုလည်း သတိရနေတာ..
နောက်ကလေး ယူမယ်ဆိုရင် ပထမကလေး ၂နှစ်ပြည့်မှ ကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနတွေက တိုက်တွန်းထားတယ်လေ။ ဒါမှ ပထမကလေးကရင့်ကျက်မှု နားလည်မှု အပြည့်ပေးနိုင်မယ်လို့ ဆိုထားတာကိုး။ ဒါပေမယ့်လဲ ခု မွေးပြီးသွားပြီ ဆိုတော့လဲ အကြီး ကလေးကို ပိုဂရုစိုက်ပေးရလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုလဲ အချစ်မလျော့ဘူးဆိုတာ သိအောင် ကြိုးစားပေးရလိမ့်မယ်။ အကြီးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အနာမရှိအောင်၊ အငယ်လေးကို သူချစ်ခင်လာအောင် လုပ်ပေးရမှာကတော့ မိဘတာဝန်ပါပဲ။
khin oo may August 31, 2010 at 12:55 PM
subuueain September 1, 2010 at 8:03 AM
Pwint Myue September 1, 2010 at 8:17 AM
သမီးလေးက အချောစားလေးပဲ.. နာမည်ဘယ်လိုပေးထားလဲ.. ကျွန်မလဲ သမီးလေးတယောက်လောက် ထပ်လိုချင်သား.. သားသားကလဲ အဖော်မရှိလို့ ပျင်းနေတာ.. :)